Midhiya Iri Kukundikana Nekuti Kushaya Kutenda Pachayo | Martech Zone
Midhiya Iri Kukundikana Nekuti Kusava Nekutenda Pachayo
China, May 1, 2014 Chishanu, May 2, 2014 Douglas Karr
Nezuro ndakaita hurukuro huru na Brad Shoemaker, nyanzvi yemuno enhau ine nhoroondo refu ichiedza kudhonza redhiyo muzera redhijitari. Zvakangoitika kuti imwe shamwari, Richard Sickels, akapinda muhofisi. Richard aive nenhoroondo huru muredhiyo zvakare. Takataura toni nezve indasitiri yeredhiyo uye ini ndakaramba ndichifunga nezvazvo nezuro husiku.
As kutengesa mhepo inoramba ichiderera uye maumambo eredhiyo achienderera mberi nekubatana, inonongedzera pachinetso padanho renhau yechinyakare… havachangotenda mazviri zvakare. Ini ndinotenda ndiro dambudziko rakafanana nemapepanhau uye terevhizheni zvakare. Panzvimbo pekuita munhu, kuita segmenting, kutora matekinoroji emuno neesocial… maindasitiri aya anoramba achifamba achienda kwakapesana. Izvi zvinogadzira chinhambwe pakati penzvimbo yeruzivo nevateereri vari kuyedza kubatana nayo.
Kubatanidzwa uye kubatanidzwa kwakakura mitsara yekubata mubhizinesi renyika. Izvo zvakafanana nemari yekuchengetedza. Kana iwe ukaisa pakati tarenda rako uye wedzera kusvika kwaro, zvinongonzwisisika kuti iwe uderedze mari yechizvarwa chizvarwa. Nhepfenyuro dzinobatanidza nyeredzi dzenyika uye dzinosiya nhepfenyuro dzadzo dzisina chinhu. Mapepanhau anoenderera mberi achimanikidza zvinyorwa zveAssociated Press uye kudzikisa vashandi vemuno. Materevhizheni anoramba achitengesa tarenda mumisika uye huwandu hwakawanda.
Imhaka yekuti havachatendi mune tarenda ravo. Kana vezvenhau uye mabloggi vakatidzidzisa chero chinhu, ndeyekuti kudiwa kweakasiyana, akasarudzika, akapatsanurwa, anofarira zvemukati ari kuwedzera, kwete kuderera. Vanhu vari kutsvaga rumwe ruzivo, kwete zvishoma, nezve hupenyu hwavo, zvavanofarira, mabhizinesi avo uye hurumende yavo. Masvikiro emagariro haana kukwira nekuda kwetekinoroji, ivo vakakwira nekuti vaitenda mavari.
Tarisa kwete kumberi kupfuura chero chinyakare midhiya saiti uye zvakafanana tsaru crap ... kamutsetse yezvinyorwa zvakanamatira pakati pegungwa rekuvhiringidza kushambadza. Kumwe kushambadzira kunoreva kumwe kwemari handiti? Kwete. Ivo vari kusanganisa izvo chaizvo zvemukati izvo isu zvatinokoshesa zvakanyanya. Uye ikozvino kukosha kweavhareji zvemukati zvavari kupa zviri kudzikira. Zvekare… kwete nekuda kwesvikiro, asi nekuda kwekuda kwezwi riri kumashure kwaro.
Nhepfenyuro, kunyanya, ndivo masters eodhiyo mhando, varaidzo, uye wega kusvika. Nei vachiramba vachitarisa kutengesa mhepo panzvimbo ye kutengesa izwi iri pamusoro pangu. Ini ndinofanira kukwanisa kufamba kupinda mune chero nhepfenyuro yeredhiyo uye ndione mitengo yavo yekubatsira mabhizinesi kugadzira avo epamoyo odhiyo, kugovera izvo chirongwa kuburikidza nefoni uye webhu kunyorera, uye kutyaira mari kumabhizinesi avo nekutsvaga, kunongedza nekusvika kune chaiko vateereri. Zviratidziro hazvidi kana kumhanya pamhepo! Svikiro harina basa… ndiko kutenda kune shungu mune izwi rakanzwika kuti rakakosha.
Handina chokwadi chekuti pane tariro kumapepanhau - zvivakwa zvinodiwa kuti urambe uchidhinda pamiti yakafa uye kugovera izvo zvirimo zvinodhura. Ivo vanofanirwa kurasa michina uye voisa mari yavo mu tarenda remuno kupinza zvakare kukosha muindasitiri yavo yakafa. Terevhizheni inoita kunge yega ine tariro… inombundikira zvemagariro nekusundira yavo yepakati nepakati nepakati pevateereri vane nzara vakamirira iyo. Ndinoda kuvaona vachivhura madhoo kumabhizimusi nevatengi vanoshuvira kushandisa vhidhiyo, vasina zviratidzo zvekufona, kugadzira, kugovera nekuita mari mavhidhiyo avo zvakare.
Ini ndinoda chinyakare midhiya uye ndinoramba ndichitenda musimba revanhu vari kumashure kweumwe neumwe wemasvikiro aya. Ndakangoti dai vakazvitenda vega.
Cherechedza: Ndakaverenga Eulogy ye Twitter pakuderera kwekutaurirana kwe Twitter. Zvinotoshamisa ndezvokuti ndakaona pepanhau rakaburitswa mazuva mashoma apfuura izvo zvakaburitsa Twitter's kukura… Vamwe vanoshandisa mamiriyoni gumi nemana. Ndiri kutya kuti Twitter inogona kunge ichitevera mumakwara enhau enhau, ichitarisa ziso pachinzvimbo chemhando yeruzivo irwo. Ndinovimba kwete… asi tichaona.
Tags: TendaBloggingpepanhauredhiyoevanhu vezvenhauterevhizheni
Maitiro Ekudzivirira Dhata Kuputsa mune Ino Omni-Channel Nyika